Hokkaido! २१ लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र र १० एयरपोर्टहरू - Best of Japan
होक्काइडो, जापान = एडोब स्टक
होक्काइडो होन्शु पछि जापानको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो टापु हो। र यो उत्तरी र सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हो। होक्काइडो जापानका अन्य टापुहरू भन्दा चिसो छ। किनकि जापानीले गरेको विकासमा ढिलाइ भएको छ, होक्काइडोमा विशाल र सुन्दर प्रकृति छ। यस पृष्ठमा, म होक्काइडोको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछु। यदि तपाईं यस लामो लेख को अन्त मा हेर्नुभयो भने, तपाईं लगभग समग्र Hokkaido बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको रुचिको क्षेत्र छ भने, तल सामग्रीहरूको तालिका हेर्नुहोस् र त्यो क्षेत्र हेर्नुहोस्।
केन्द्रीय होक्काइडो (डुओ)
नर्थेन होक्काइडो (डुहोकु)
साउथेन होक्काइडो (Dounan)
पूर्वी होक्काइडो (डोउटो) १: तोकाची
पूर्वी होक्काइडो (डोउटो) २: कुशिरो
पूर्वी होक्काइडो (डोउटो):: ओखोस्टक
Biei-cho, Hokkaido = Adobe स्टॉक को एक सुन्दर पहाडी
होक्काइडो, होन्शु, शिकोको र क्युशु संग जापानको टापु बनाउने चार प्रमुख टापु मध्ये एक हो। अन्य जापानी टापुहरू जस्तै, होक्काइडोमा ज्वालामुखीहरू छन्। त्यसैले त्यहाँ धेरै स्पा रिसोर्टहरू छन्।
यदि तपाईं होक्काइडो जानुहुन्छ भने, म विशेष गरी दुई चीजहरू सिफारिस गर्दछु।
पहिले, किन तपाईं होक्काइडोको अनुपम शहरहरूको भ्रमणको आनन्द लिनुहुन्न? जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दर शहरहरू जस्तै सप्पोरो, हाकोडाटे, ओटारु छन्। ती शहरहरू सुसि र रामेन जस्ता धेरै स्वादिष्ट खानाहरूका लागि पनि धेरै प्रख्यात छन्।
दोस्रो, किन तपाईं होक्काइडोको अद्भुत प्रकृतिको आनन्द लिनुहुन्न? २० औं शताब्दीको पहिलो आधासम्म होक्काइडोको विकास हुन सकेन, यति धेरै जंगली प्रकृति बाँकी छ। त्यस पछि बनेका फूल क्षेत्रहरू र चराहरू पनि तपाईंको दिमागलाई स्फूर्ति प्रदान गर्दछ।
होकाइडोमा प्रकृति चार मौसमको परिवर्तन अनुसार सुन्दर परिवर्तन हुन्छ। जाडो मा तपाईं हिउँद दृश्य आश्चर्यजनक संग शीतकालीन खेल को मजा लिन सक्नुहुन्छ। वसन्त र गर्मी आरामदायक छ, फूल बगैचा अद्भुत छन्। सेप्टेम्बर पछि, तपाईं शानदार शरद leavesतु पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
होक्काइडोको यात्राको योजना बनाउँदा, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछ शहर जस्तै सफ्पोरो र प्रकृतिमा धनी पर्यटन स्थलहरू मिलाउन।
>> फोटोहरू: होक्काइडोमा घोडा
शरद र जाडो छिटो गर्मी पछि होक्काइडो मा फूल बगैचा मा चाँडै आउँछ
साप्पोरो धेरै पटक भेट्न लायकको शहर हो। जब तपाईं साप्पोरो जानुहुन्छ, तपाईं अद्भुत दृश्यहरू पाउनुहुनेछ। यस पृष्ठमा, मैले वसन्त, गर्मी, शरद र जाडोमा सप्पोरोका विभिन्न तस्बिरहरू पोष्ट गरेको छु। कृपया साप्पोरो फेला पार्नुहोस् तपाईंले अहिले सम्म अनुभव गर्नुभएको छैन। सप्पोरोको होक्काइडो म्यापमा सामग्रीहरूको तालिका सप्पोरोको फोटोहरू ...
होक्काइडो जापानका अन्य टापुहरू भन्दा चिसो छ। यस जाडो मा हिउँद लामो छ, वसन्त, गर्मी, शरद छोटो छ। पहिलो हिउँ नोभेम्बरको सुरूमा खस्छ, हिउँ पनि अप्रिलको सुरुमै खस्न सक्छ। त्यसोभए यो अप्रिलको अन्त पछि होकरीकाडोमा चेरी फूलहरू फूल्नेछन्। पछि, विभिन्न फूलहरू एकैचोटि फुल्न थाल्छन्।
जापानका अन्य क्षेत्रमा वर्षाको मौसम जुनमा शुरू हुन्छ, तर होकाइडोमा वर्षाको मौसम विरलै छ। जुलाई र अगस्टको पहिलो आधा बीच, होक्काइडोसँग सुन्दर छोटो गर्मी छ जसमा विशाल घाँसे मैदान र फूलहरूको बगैंचा छ। यो अन्य क्षेत्रहरु भन्दा चिसो छ। शरद अगस्तको अन्तमा आइपुग्छ, र शरद leavesतुको पातहरू सेप्टेम्बरमा डाईसेट्सुजान जस्ता हिमाली क्षेत्रबाट सुरू हुन्छ। सप्पोरो जस्ता प्रमुख शहरहरूमा, शरद leavesतुको पात मध्य अक्टोबरमा - चरम शिखरमा पुग्छ।
होक्काइडोमा, विशाल घाँस मैदानहरूले गर्मीमा सुन्दर फूलहरू भएका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। र यी घाँस मैदानहरू डिसेम्बर देखि फेब्रुअरीसम्म हिउँले भरिएका हुन्छन्। यस पृष्ठमा, म मध्य होक्काइडोमा ओबिहिरो, बिइ, फुरानो, इत्यादिमा रहस्यमय हिउँको दृश्य प्रस्तुत गर्नेछु। होकाइडोको विवरणको लागि कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। ...
स्की रिसोर्ट्स नोभेम्बरको अन्तदेखि मेको सुरूमा खुल्ला हुन्छन्। यद्यपि यो क्षेत्रको आधारमा थोरै फरक हुन्छ। सप्पोरो र असाहिकावा जस्ता प्रमुख शहरहरूमा, डिसेम्बरदेखि हिउँ पर्ने अवस्था सुरु हुन्छ। जनवरीको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीको मध्यसम्म सहरी क्षेत्रमा snow० देखि 70० सेन्टीमिटर हिउँ पर्दछ। यद्यपि सहरी क्षेत्रमा सडक हटाउन हिमपात गरिएको छ।
फेब्रुअरीको शुरुदेखि फेब्रुअरीको अन्तसम्म, जाडो फेस्टिवलहरू जस्तै सप्पोरो हिउँ फेस्टिभल होक्काइडोका विभिन्न स्थानहरूमा आयोजित गरिन्छ।
होक्काइडोमा हिउँ अक्सर आउँछ किनभने पश्चिममा जापानको सागरबाट भिजेको बादलहरू आउँछन्। यी बादलहरूले विशेष गरी जापान सागर छेउको नेसेको जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा हिउँ गराउँछन्। अर्कोतिर, होक्काइडोको पूर्वपट्टि, जापान समुद्री किनार भन्दा हिउँ कम छ।
मासिक तापमान इत्यादि को विवरणका लागि कृपया माथिका लेखहरू हेर्नुहोस्।
रेलमार्ग, भाडा-एक कार
होन्श्यु र क्युशुको तुलनामा होक्काइडोमा यति धेरै रेलहरू छैनन्। यसबाहेक रेलमार्फत प्रमुख शहरहरू बीच यात्रा गर्न प्राय: केही घण्टा लाग्छ। जे होस् यो भाँडा-ए-कार प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो, यो पर्यटक स्पटहरू बीचमा जानका लागि समय लाग्छ। बुलेट ट्रेन नेटवर्क होन्शुबाट हाकोडाटे मात्र पुगेको छ। त्यसैले यदि तपाईं होक्काइडोको विस्तृत क्षेत्रहरू अन्वेषण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्लेनको साथ राम्रो गर्नु पर्छ।
जेआर एक्सप्रेस प्रयोग गर्दा अनुमानित यात्रा समय
सप्पोरो-हकोडेट:3घण्टा 30 मिनेट
सप्पोरो-असाहिकावा 1 घण्टा 30 मिनेट
सप्पोरो-अबाशिरी5घण्टा 30 मिनेट
सप्पोरो-वाक्कनाई5घण्टा 10 मिनेट
सप्पोरो-ओबिहिरो2घण्टा 40 मिनेट
सप्पोरो-कुशिरो4घण्टा 10 मिनेट
>> कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् JR Hokkaido आधिकारिक वेबसाइट JR मार्ग नक्शा र समय सारिणीको लागि
होक्काइडोमा थुप्रै एयरपोर्टहरू छन्। कृपया माथिको नक्शामा मुख्य एयरपोर्टहरू हेर्नुहोस्। सब भन्दा ठुलो एयरपोर्ट साप्पोरोको नजिक नयाँ Chitose एयरपोर्ट हो।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाहेक, निम्न प्रमुख एयरपोर्टहरू प्राय: प्रयोग गरिन्छ।
मेमानबेत्सु एयरपोर्ट (अबाशिरी)
अन्य एयरपोर्टहरूको बारेमा, म तिनीहरूलाई प्रत्येक क्षेत्रको विवरणमा परिचय दिनेछु
किनभने होक्काइडो ठूलो छ, जलवायु र पर्यटन सामग्री क्षेत्र अनुसार फरक छन्। यस लेखमा, म होकाइडोलाई निम्न चार क्षेत्रहरूमा परिचय दिनेछु।
यदि तपाईं पहिलो पटक होक्काइडो जानुहुन्छ भने, म सिफारिस गर्दछु कि सेन्ट्रल होक्काइडो (जापानीमा "डुओ") पहिले। सेप्पोरोमा, सेन्ट्रल होक्काइडोको मुख्य शहर, त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन वर्षभरि दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। र त्यहाँ धेरै दर्शनीय स्थलहरू छन् जहाँ तपाईं निसेको द्वारा टाइप गरे अनुसार राजसी प्रकृतिको मजा लिन सक्नुहुन्छ। सेन्ट्रल होक्काइडोको जापान सागर पक्ष जस्तै निसेको त्यो क्षेत्र हो जहाँ हिउँ विशेष गरी लोकप्रिय छ। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार यी ठाउँहरूलाई मिलाउनको लागि योजना गर्न सक्नुहुन्छ। यातायात सामान्यतया होक्काइडोमा असुविधाजनक हुन्छ, तर मध्य होक्काइडोमा तपाईं तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा सार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं होक्काइडोमा लामो समयसम्म बस्न सक्नुहुन्न, तपाईं साप्पोरो वा निसेको मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक नक्सामा क्लिक गर्नुहोस् Google नक्सा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शन गर्नका लागि। मौसमको आधारमा पहुँच समय भिन्न हुन्छ। उडानहरू कहिलेकाँही परिवर्तन हुन्छन्।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट को नक्शा
नयाँ Chitose एयरपोर्टको बारेमा मैले तलको लेखमा विस्तारपूर्वक परिचय दिएँ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तल लेख मा क्लिक गर्नुहोस्।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो लगभग minutes० मिनेटको दूरीमा जेआर एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सप्पोरो शहर केन्द्रबाट छ। यो एयरपोर्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र घरेलु टर्मिनलहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोमा सप्पोरो, निसेको, ओटारु इत्यादिको वरिपरि यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले नयाँ Chitose एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। यस पृष्ठमा, म ...
>> नयाँ Chitose एयरपोर्ट को आधिकारिक साइट
कृपया मलाई नयाँ Chitose एयरपोर्टको बारेमा माथिको लेखबाट सारांश उद्धृत गर्नुहोस्।
जेआर एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सप्पोरो स्टेशन = minutes० मिनेट
निसेको = २ घण्टा कार द्वारा, २ घण्टा minutes० मिनेट - hours घण्टा minutes० मिनेट बस द्वारा (स्की रिसोर्टमा निर्भर गर्दै)
सप्पोरो ओकाडामा एयरपोर्ट
Okadama एयरपोर्ट को नक्शा
>> सप्पोरो ओकाडामा एयरपोर्टको आधिकारिक साइट
सप्पोरो ओकाडामा एयरपोर्टले नयाँ Chitose एयरपोर्ट पूरा गर्दछ। यद्यपि यो एयरपोर्ट जापानको समुद्रको नजिक छ, त्यसैले हिउँको सम्भावना छ।
जेआर सप्पोरो स्टेशन = कार द्वारा २० मिनेट
सप्पोरो सेन्ट्रल बस टर्मिनल = बस द्वारा 35 XNUMX मिनेट
हाकोडाटे, कुशिरो, ishषिरी,
मिसावा (अओमोरी), मत्सुमोटो, शिजुओका
माटोबाट सप्पोरोको शीतकालीन क्षितिज दृश्य। मोइवा = शटरस्टक
पुरानो होक्काइडो सरकारी कार्यालयको सपोरो, होक्काइडो, जापानको दृश्य = शटरस्टक
साप्पोरो होक्किडोको सबैभन्दा ठूलो शहर हो जुन २० लाख जनसंख्याको जनसंख्या हो। होक्काइडोका %०% भन्दा बढी मानिसहरू यस शहरमा बस्छन्।
सप्पोरो १ wilderness औं शताब्दीको अन्तसम्म केही नभएको विशाल मरुभूमि थियो। यस शहरको योजना बनाएर विकसित गरिएको थियो। यसैले सप्पोरोको शहर दृश्य क्रमबद्ध छ।
सप्पोरो जापानको सबैभन्दा नयाँ विशाल शहर हो। यस शहरमा अन्डरपासको विकास भइरहेको छ ताकि चिसो मौसममा पनि मानिसहरू आरामसँग हिड्न सक्दछन्। अन्डरपासबाट भुइँमा बाहिर जाँदा मुख्य सडकमा "Odori पार्क" भनिने लामो पार्क छ। यस पार्कमा वर्षभरि विभिन्न उत्सवहरू आयोजना गरिन्छन्। फेब्रुअरीमा आयोजित "सप्पोरो हिउँ महोत्सव" सबैभन्दा प्रसिद्ध छ।
सप्पोरो यसको स्वादिष्ट खानाको लागि पनि परिचित छ। जापानको समुद्री मा संकलित माछा र खेकाहरू धेरै स्वादिष्ट छन्। होक्काइडोमा ताजा ताजा सब्जीहरू पनि उत्तम हुन्। र सबै प्रकारले "साप्पोरो रामेन" खानुहोस्।
साप्पोरो वरपर धेरै पार्कहरू छन्। यदि तपाईं रोपवेमा जानुहुन्छ र माउन्टको शीर्षमा जानुहुन्छ भने। मोइवा, तपाई साप्पोरो शहर देख्न सक्नुहुनेछ। यो दृश्य साँच्चै उत्तम हो।
यो लगभग minutes० मिनेटमा JR एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट सप्पोरोसम्म छ।
>> सप्पोरोको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
निसेको जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय स्की रिसोर्ट क्षेत्र हो। यहाँ प्रत्येक वर्ष जाडोमा, दुनिया भर बाट पर्यटकहरु आउँछन्। किनभने त्यहाँ धेरै विदेशी पर्यटकहरू छन्, होटेलहरू र स्की रिसोर्टहरूको स्टाफसँग अंग्रेजीमा कुरा गर्न सजिलो छ।
निसेको जापानको सागरको नजिकै अवस्थित छ। जाडोमा जापानको सागरबाट आउने नम बादलहरू निसेकोको पहाडले ढाल्यो र हिउँ पर्न दिनुहोस्। यहाँको हिउँ गहिरो छ र हिउँको गुणस्तर उत्तम छ।
होसेकोडोमा निसेको तातो स्प्रि sp स्पट पनि हो। जाडोको खेलको मजा लिइसकेपछि, तपाई आफ्नो चिसो शरीर तातो स्प्रि inमा न्यानो पार्न सक्नुहुन्छ।
निसेकोमा तपाई विभिन्न गतिविधिहरू जस्तै रमाईलो र राफ्टि spring स्प्रिंग देखि शरद toतुमा रमाउन सक्नुहुन्छ। गर्मीमा धेरै मानिसहरू लामो समय सम्म बस्छन्।
Niseko पनि एक शब्दमा भने, त्यहाँ धेरै स्की रिसोर्टहरू छन्। यो लगभग २ घण्टा 2० मिनेट बस द्वारा सप्पोरो बाट Niseko सम्म छ। यो लगभग २ घण्टा New० मिनेट नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट छ, तर स्की रिसोर्टमा निर्भर रहन यसले अधिक समय लिन सक्दछ।
>> Niseko को बारे मा विवरणको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ओट्टारु नहर, जाडोमा होक्काइडो
यदि तपाईं जाडोमा सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म जापानको सागर छेउमा रहेको पोर्ट सहर ओटारु भ्रमण गर्न सिफारिस गर्दछु सप्पोरो बाहेक। ओतारु पोर्टमा त्यहाँ नहरहरू, ईंट गोदामहरू, रेट्रो पश्चिमी शैलीको भवनहरू र अन्य छन्। प्रत्येक फेब्रुअरीमा, "ओटारु स्नो लाइट ... नामको हिउँदको चाड ...
ओटारु एउटा पोर्ट शहर हो जुन सप्पोरोको km० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। ओटारुमा, साप्पोरोबाट JR एक्सप्रेस ट्रेनले लगभग minutes० मिनेट लिन र नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट १ घण्टा १० मिनेट लिन सक्दछ।
यस बन्दरगाह शहरमा २० औं शताब्दीको पहिलो आधामा बनाइएको रेट्रो सडकहरूको दृश्यहरू छन्। ओटारु त्यस युगमा व्यापार पोर्टको रूपमा सफल भयो। पछि, शहर सुस्त थियो, तर अब यो दर्शनीय स्थल द्वारा पुनः जीवित छ।
ओतारु पोर्टमा त्यहाँ नहरहरू, ईंट गोदामहरू, रेट्रो पश्चिमी शैलीको भवनहरू र अन्य छन्। प्रत्येक फेब्रुअरीमा, "ओटारु स्नो लाइट पाथ" नामको शीतकालीन उत्सव आयोजना गरिन्छ र नहर सुन्दर लालटेनको प्रकाशको साथ चम्किन्छ।
ओटारु यसको माछा धेरै स्वादिष्टको लागि पनि चिनिन्छ। यस शहरमा धेरै सस्तो र स्वादिष्ट सुशी रेस्टुरेन्टहरू छन्।
हिउँले कभर गरिएको रेट्रो सडकको आनन्द लिन र फेरि स्वादिष्ट सुशी खानको लागि छोटो यात्रा पर्यटकहरूमाझ लोकप्रिय छ। किन तपाईं Otaru द्वारा रोक्न छैन?
>> "ओटारु हिउँ प्रकाश मार्ग" को बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ताल शिकोट्सु र माउन्ट। एनिवा, होक्काइडो, जापान
लेक शिकोट्सु आइस फेस्टिवल भनेको हिम मूर्तिकला होक शिकोट्सु तातो स्प्रि ,्ग्स, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा सम्पन्न हुन्छ
जनवरीको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीको मध्यसम्म, "लेक शिकोट्सु आइस फेस्टिवल" केन्द्रीय होक्काइडोको शिकोत्सुको-ओन्सेनमा आयोजित हुनेछ, जुन न्यू चितोज एयरपोर्टबाट कारमा करिब 30० मिनेटको दूरीमा छ। शिकोट्सुको-ओन्सेन शिकोट्सु तालको किनारमा तातो वसन्त शहर हो। यस चाडमा, ठूला र ...
होक्काइडोको भव्य प्रकृतिको आनन्द लिंदा तालहरू एक बिन्दु हुन्।
होक्काइडोमा शान्त हिमालहरूद्वारा घेरिएका धेरै आश्चर्यजनक तालहरू छन्। सब भन्दा प्रसिद्ध पूर्वी होक्काइडो मा अकान ताल र ताल माशु छन्। यद्यपि यी पूर्वी होक्काइडोका तालहरू सहरी क्षेत्रबाट निकै टाढा अवस्थित छन् भने मध्य केन्द्री होक्काइडोले शहरी क्षेत्रको तुलनात्मक रूपमा निकट छ। मध्य होक्काइडोमा यी तालहरूमध्ये सब भन्दा प्रख्यात तालहरू शिकोत्सु र ताल तोया हो।
ताल Shikotsu सुविधाजनक नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट by० मिनेट कार द्वारा अवस्थित छ। यो बस द्वारा लगभग minutes० मिनेट लाग्छ। यद्यपि यो एयरपोर्टबाट धेरै नै टाढा छ, तर जो वास्तवमा शिकोट्सु तालमा गएका थिए तिनीहरू आश्चर्यचकित छन् कि यो ताल धेरै अचम्मको छ। यो ताल, जुन 30० किलोमिटर वरपर छ, पानीको गहराई 40 40० मिटर छ। यो जापानको दोस्रो सबैभन्दा गहिरो ताल हो। यसबाहेक, तालको पारदर्शिता पूर्वी होक्काइडोको माशु ताल र रूसको बैकल तालसँग अद्भुत छ।
तपाईं यो तालमा डुating्गा खेल्न सक्नुहुन्छ। एक ठूलो दर्शनीय डु boat्गा पनि संचालित छ। यदि तपाईंसँग समय छ भने यस डु ride्गामा सवारी गर्नुहोस्। तपाईं तालमा गहिरो देख्न सक्नुहुने छक्क पर्नुहुनेछ। लेकसाइड जंगल अन्वेषण गर्न यो पनि राम्रो विचार हो।
यी क्रेटर तालहरू होक्काइडोको दक्षिणपश्चिमी भागमा ज्वालामुखीहरूको क्रियाकलापबाट जन्मेका हुन्। त्यहाँ बाहिरी क्षेत्रमा स्पा रिसोर्टहरू छन्।
प्रत्येक वर्ष जनवरीको अन्तमा, जाडो चाड पनि माथिको दोस्रो चित्रमा देखाइए जस्तै गरीन्छ। शिकोत्सु तालको विवरणहरूको लागि कृपया निम्न आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> शिकोत्सुको ओन्सेन र्योकान एसोसिएसनको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टोया ताल, जो होक्काइडोको दक्षिणपश्चिमी भागमा अवस्थित छ, शिकोट्सु-तोया राष्ट्रिय निकुञ्ज, जापानको हो
माउन्टमा Usu, रोपवेहरू चलिरहेका छन्, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
ताल तोया लगभग १ घण्टा minutes० मिनेट JR एक्सप्रेस ट्रेन र नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट बसमा अवस्थित छ। यो क्याल्डेरा ताल हो जुन ज्वालामुखी गतिविधिमा जन्म भएको थियो शिकोट्सु जस्तो। यो लगभग ११ किलोमिटर पूर्व-पश्चिम, km किलोमिटर उत्तर-दक्षिण, शिकोट्सु ताल भन्दा थोरै सानो परेको गोलाकार ताल हो।
टोया तालमा, तपाईं नजिकको "सायरो अवलोकन डेक" बाट शानदार दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं केवल Mt.Usu (उचाई 737 XNUMX मीटर) मात्र देख्न सक्नुहुन्न, तर Niseko को टाढाका पहाडहरू पनि।
माउन्ट उसु एक ज्वालामुखी हो जुन अहिले पनि सक्रिय छ। वर्तमानमा तपाईं खुट्टाबाट ठूलो रोपवेको साथ शिखरमा जान सक्नुहुन्छ। शिखर स्टेशनबाट-मिनेट पैदल यात्रा गर्ने वेधशालाबाट तपाईं समुद्रमा टाढा टाढा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
यस तालमा ठूलो आनन्द डु boat्गा पनि संचालित छ। यदि तपाईंले यो रमाईलो डु take्गा लिनुभयो भने, तपाईं तालको बीचमा अवस्थित टापुमा जान सक्नुहुन्छ (जाडोमा बाहेक)। यस टापुमा तपाईं जंगली हिरणलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ।
टोया तालको किनारमा, टोयको ओन्सेन (ताल तोया तातो वसन्त रिसोर्ट) छ। टोयको ओन्सेन होक्काइडोको प्रतिनिधित्व गर्ने अद्भुत स्पा शहर हो। यस स्पा शहरको बारेमा, मैले यसलाई तातो स्प्रि aboutको बारेमा लेखमा प्रस्तुत गर्‍यो।
>>"टोयोको ओन्सेन" को बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
टोमामू = शटरस्टकमा क्लोसको समुद्र
तोमामू एक विशाल हिमाली रिसोर्ट हो जुन तपाईं सजिलैसँग नयाँ चितो एयरपोर्टबाट जान सक्नुहुन्छ। यो रिसोर्ट होशीनोया द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ जुन जापानको प्रतिनिधि रिजोर्ट होटेल चेन हो।
यस रिसोर्टमा तपाई विशाल होटलहरूमा रहँदै विभिन्न गतिविधिहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं गर्मी मा पैदल यात्रा, घोडा सवारी, राफ्टि,, बेलुन इत्यादि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। जाडोमा तपाईं स्कीइ,, स्नोमोबाइलि,, स्लेडिding र यस्तै अरू रमाउन सक्नुहुनेछ। किनकि तपाईं होटेल कोठामा आधार बनाउन सक्नुहुन्छ, यो साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूमा लोकप्रिय छ।
थप रूपमा, तोमामूसँग एक अद्वितीय यात्रा छ। मेदेखि अक्टुबर सम्म, अतिथिहरू बिहान सबेरै चाँडो पहाडको टुप्पोमा गन्डोलामा जान सक्दछन्। माथि चित्रमा देखिए झैं बादलको सागर प्राय: त्यहाँ हुन्छ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईंले अचम्मको विश्वको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट Tomamu जानुहुन्छ भने, तपाईंले पहिले एयरपोर्टबाट JR लिनु पर्छ। त्यसो भए कृपया मिनामी Chitose स्टेशन मा उतर्नुहोस्, १ स्टेशन अगाडि। अर्को, जेआर लिमिटेड एक्सप्रेस द्वारा मिनामी Chitose स्टेशन Tomamu स्टेशन को लागी जाऔं। यदि तपाईं यस स्टेशनमा जानुहुन्छ भने, एक विशाल रिसोर्ट तपाईंको अगाडि फैलिनेछ। एयरपोर्टबाट यात्रा समय १ घण्टा minutes० मिनेटको छ।
म पनि यस रिसोर्टमा दुई पटक मेरो बच्चाहरु जवान थिए जब जानुभएको थियो। दुर्भाग्यवस, मैले पहाडको माथिको बादलहरूको समुद्र कहिल्यै देखेको छैन।
>> फोटोहरू: Tomamu
होकिकाइडो, जापानको युबारी शहरमा तैयार स्की ढाँचा र गन्डोला = शटरस्टक
यदि तपाईं सुन्दर दर्शनीय स्थल वा विलासी रिसोर्ट्सबाट सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्न भने, म तपाईंलाई युबारीमा जान सिफारिस गर्दछु। युबरी एक पहाडी शहर हो जुन सप्पोरोको नजिक तोमामु भन्दा नजिक छ। यो शहर एक पटक कोइला खानीहरु संग फस्टायो। यद्यपि कोइला खदान बन्द भएदेखि यो स्थिर भयो र २०० 2007 मा आर्थिक पतन भयो।
यस शहरमा तोमामू जस्तो कुनै सुन्दर वातावरण छैन। यसको सट्टामा, त्यहाँ युगका धेरै औद्योगिक सम्पदाहरू छन् जब यो शहर कोइला खानीले फस्टायो। कोइला माइनरहरूले बानी परेका चलचित्रहरू हेरेका कारण शहरमा अझै पनि पुरानो जमानाका चलचित्रहरूको साइनबोर्डहरू छन्। यदि तपाईं यस्तो रेट्रो शहर अन्वेषण, तपाईं २० औं शताब्दीमा जापान अनुभव गर्न सक्षम हुनेछ।
युबारीमा कोइला खानी बन्द भएपछि स्की रिसोर्टको विकास अघि बढ्यो। नतिजाको रूपमा, त्यहाँ Yubari शहर मा एक स्की रिसोर्ट छ। तोमामू जस्तो कुनै दर्शनीय छैन, तर शहरका मानिसहरूले स्की दर्शकलाई पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छन्।
युबारी शहरको रूपमा पनि प्रसिद्ध छ जुन धेरै स्वादिष्ट खरबूजे उत्पादन गर्दछ। किसानहरूले यसलाई राम्रो कामका साथ बनाए। तपाईं यस शहरको होटेलमा सबैभन्दा राम्रो खरबूज खान सक्नुहुन्छ।
मैले युबारीमा धेरै पटक अन्तर्वार्ता लिएको छु। मानिसहरू गरिब छन्। तर उनीहरू आफ्ना शहरहरू मन पराउँछन् र यो शहर पुनःजीवन गर्न गाह्रो छ। मैले युबारीका व्यक्तिहरूबाट सकारात्मक जीवन यापन गर्ने क्षमता पाएँ। किन तपाई सब भन्दा चिसो शहर मा बाँच्न कोशिश मान्छे भेट्न छैन?
यो १ घण्टा minutes० मिनेट लिन सक्दछ बसबाट सप्पोरो स्टेशनबाट युबारी स्टेशनसम्म, १ घण्टा १० मिनेट बसबाट नयाँ Chitose एयरपोर्ट। जे होस्, तपाईले माथिको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि प्यारा ट्रेन द्वारा जान सिफारिस गरिएको छ। कृपया शिन-युबारी स्टेशनको एक्सप्रेसबाट जानुहोस् र त्यहाँबाट यो प्यारो ट्रेनमा चढ्नुहोस्।
उत्तरी होक्काइडो (जापानीमा "डुहोकु") जापानको सबैभन्दा चिसो क्षेत्र हो। यदि तपाईं जाडोमा होक्काइडोको उत्तरी भागमा वाककनै जानुहुन्छ भने, तपाईंलाई चिसो बतासले चकित पार्नु पर्छ। उत्तरी होक्काइडोमा त्यस्तो ठूलो शहर छैन किनकि यसको जनसंख्या 50,000०,००० भन्दा बढी छ। त्यसकारण, प्रशासनिक जिल्लाको रूपमा, असाहिकावा जुन दक्षिणमा थोरै अवस्थित रहेको ठूलो शहर हो, उत्तरी होक्काइडोको मध्य शहरको रूपमा लिइन्छ। यातायात नेटवर्कहरू जस्तै बसहरू पनि Asahikawa साथ नजिकबाट जोडिएको छ। यस कारणले गर्दा, म यस पृष्ठमा अन्य पर्यटक पुस्तकहरू जस्तै उत्तरी होक्काइडोमा Asahikawa र Biei आदि परिचय गर्दछु। यसबाहेक, असाहिकावा जापानको सबैभन्दा चिसो मानिन्छ, किनकि यो चिसो हिमाली क्षेत्रको नजिकको बेसिनमा अवस्थित छ।
उत्तरी होक्काइडो यति विस्तृत छ कि तपाईं सबैतिर जान सक्नुहुन्न। त्यहाँ तीनवटा योजनाहरू छन्। सर्वप्रथम, तपाईं Asahikawa नजिकको लोकप्रिय स्पटहरू जस्तै Biei, Furano, Daisetsuzan को लागी एक यात्रा सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो, "नर्दन होक्काइडो" लाई समात्न नदिन, दक्षिणमा रहेको सप्पोरोबाट फुरानो र बीइमा जाने योजना पनि आकर्षक छ। यदि तपाईं पहिलो पटक होक्काइडो जानुहुन्छ भने, म यो योजना सिफारिस गर्दछु। र तेस्रो कुरा, त्यहाँ वाक्कनाईमा केन्द्रित उत्तरी होक्काइडोको उत्तरी भागमा घुम्न जाने योजनाहरू छन्। यो अन्तिम योजना उनीहरूको लागि उपयुक्त छ जो धेरै चोटि होक्काइडो आएका छन्। तपाईं पक्कै राम्रो कुनै ज्ञात छैन एक जंगली संसार को आनन्द उठाउनुहुनेछ।
Asahikawa एयरपोर्ट को नक्शा
>> Asahikawa एयरपोर्ट को आधिकारिक साइट
जाडोमा असाहिकावा एयरपोर्ट हिउँ हटाउने काम लगभग उत्तम छ, र हिउँका दिनमा पनि केही उडान रद्दहरू छन्। हालसालै, एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल पूरा भएको छ। Asahikawa साप्पोरोको तुलनात्मक रूपमा करीव छ, जेआर सीमित एक्सप्रेसवे सप्पोरोको बीच आन्दोलनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
JR Asahikawa स्टेशन = बस द्वारा 30०-40० मिनेट
बस द्वारा Asahiyama चिडियाखाना = minutes 35 मिनेट
Furano = बस द्वारा १ घण्टा
TAIPEI, चार्टर उडानहरू पनि सञ्चालन हुन सक्छ
हनेडा (टोक्यो), Chuu अन्तर्राष्ट्रिय (नागोया), Itami (ओसाका)
Wakkanai एयरपोर्ट को नक्शा
>> Wakkanai एयरपोर्ट को आधिकारिक साइट (केवल जापानी)
JR Wakkanai स्टेशन: बस बाट minutes० मिनेट
Wakkanai एयरपोर्ट जापानको उत्तरी एयरपोर्ट हो। यो एयरपोर्ट वाककनै र केप सोयाको बीचमा अवस्थित छ जुन यस क्षेत्रमा लोकप्रिय पर्यटकीय आकर्षण हो। टोकियो उडान एक दिनमा उडान हो। र सप्पोरोको लागि दिनको दुई उडानहरू हुन्।
हनेडा (टोकियो), सप्पोरो
राजा पेंगुइन हिंड्ने परेड शो आसपासका मानिसहरू असाहिमा चिडियाघर, असाहिकावा, होक्काइडो, जापानमा रमाईलोको साथ हेरिरहेका थिए ＝ शटरस्टक
असाहिकावा ठूलो शहर होa340,000०,००० को जनसंख्या, होक्काइडोको सप्पोरोको छेउमा। यो शहर उत्तरी होक्काइडोमा आर्थिक, पर्यटन र यातायातको केन्द्र हो। यो लगभग १ घण्टा 1० मिनेट JR एक्सप्रेस द्वारा सप्पोरो बाट छ।
असाहिकावा होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो बेसिन हो जुन डाईजेट्सुजान जस्ता पर्वतहरूले घेरिएको छ। त्यसैले तापमान भिन्नता ठूलो छ। जाडोमा न्यूनतम तापमान माइनस १० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुन्छ। हिउँ प्रायः खस्दछ।
Asahikawa मा सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण Asahiyama चिडिया घर हो। यस चिडियाखानामा, विभिन्न चलनलाई बढाइबढाइ गरीन्छ ताकि जंगली जनावरहरूको व्यवहार नजिकै देख्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, पेंगुइन एक्वैरियम मा तपाई उनीहरुलाई उच्च वेग मा पौडिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, तपाईं यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि पेन्गुइनहरू बच्चाहरू जडहरूमा चिडियाखाना जत्तिकै सुन्दर हिंड्छन्। यस चिडियाखानामा भ्रमण गर्नेहरूको संख्या एक वर्षमा १ 1.4. लाख मानिसमा पुग्छ।
Asahikawa मा, "Asahikawa शीतकालीन महोत्सव" प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरीको शुरुमा आयोजित हुन्छ। करीव १ लाख पर्यटकहरू यस चाडमा आउँछन्। यस चाडमा, धेरै हिउँद मूर्तिहरु ईशिकारी नदीको खोलामा माथि लाइन। यी हिउँ मूर्तिहरू "सप्पोरो हिउँ महोत्सव" को मूर्ति भन्दा ठूला छन्।
यदि तपाईं त्यस्तो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ जहाँ हिउँ पर्दैन, तपाईं माथिको भिडियोमा देखिएको "स्नो क्रिस्टल संग्रहालय" मा जान सक्नुहुन्छ। यस संग्रहालयको विषयवस्तु "हिउँ" हो। यस संग्रहालयको भित्री भाग बरफ महल जत्तिकै सुन्दर छ जुन डिज्नी फिल्म "फ्रोजन" मा देखा पर्दछ। यस महलमा बरफको अंश छ। तपाईंले गर्मीमा पनि गम्भीर चिसो संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं भाँडाको पोशाक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र राजकुमारी पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
>> Asahikawa पर्यटन को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जापान, होक्काइडोमा डेइसेट्सुआन नेशनल पार्क
यदि तपाईं होक्काइडोमा भव्य प्राइभल वन देख्न चाहानुहुन्छ भने म मिकुनी तोज दर्रा (समुद्री सतहबाट १,१1,139 m मिटर) डाईसेट्सु National नेश्नल पार्कमा चलाउन सिफारिश गर्दछु। मेको लेटदेखि जुनसम्म, वरपरको ताजा हरियो अद्भुत छ। सेप्टेम्बरको अन्तदेखि अक्टुबरको शुरुमा, तपाईं अद्भुत शरद colorsतु रंगहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ, ...
कामिशिरो टाउन, होक्काइडोमा, त्यहाँ एक अप्रयुक्त आर्केड ब्रिज छ "तशुबेत्सु पुल" (१ 1937 XNUMX मा सम्पन्न भयो)। यो पुल गर्मी र गिरावटमा बाँधमा डुबेको छ, तर यो जाडो र वसन्तमा पानी माथि देखा पर्दछ जब पानी कम हुन्छ। के तपाइँ यस उत्कृष्ट संसारको भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ ...
डायसेट्सुजान होक्काइडोको मध्यभागमा पर्वतीय क्षेत्र हो। क्षेत्र उत्तर र उत्तरमा extend 63 किमी र पश्चिम देखि west km किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। सब भन्दा अग्लो पहाड मा.शहरी.असहिदाके समुद्रको सतहबाट २,२ 59 मिटर मा छ। यस बाहेक, २,००० मिटर पहाडहरू जारी छन्। यदि तपाईं अद्भुत प्रकृतिबाट आनन्द लिन चाहनुहुन्छ जुन मानव द्वारा विकसित गरिएको छैन, तपाईं यस हिमाली क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ।
डेइसेत्सुजन शहरी क्षेत्रहरू जस्तै आशिकावा जस्ता धेरै चिसो छ, त्यसैले कृपया सावधान रहनुहोस्। डेसेत्सुजनमा, गिरावटको वातावरण अगस्टको अन्ततिर बग्न थाल्छ। सेप्टेम्बरदेखि शरद पातहरू पहाडको शिखरबाट शुरू हुन्छ। लामो जाडो अक्टूबर देखि अर्को वर्षको मे सम्म जारी रहन्छ। डेसेट्सुजानमा। ग्रीष्म Julyतु जुलाईको देखि अगस्टको शुरुवातमा केवल एक महिना हो। यस समयमा पनि न्यूनतम तापक्रम फ्रिजिंग पोइन्टबाट तल झर्न सक्छ।
माउन्ट असिडाके र माउन्ट। कुरोडेकसँग रोपवेहरू छन्, तपाईं तिनीहरूका वरिपरि हिंड्न सक्नुहुन्छ। विवरणको लागि कृपया तल मेरो लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
डाईजेट्सुजानको पैदल यात्रा सम्बन्धी जानकारीका लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
डेइसेत्सुजन पनि ज्वालामुखी समूह हो। त्यसो भए, बाहिरी छेउमा तातो वसन्त रिसोर्टहरू छन्। जब तपाईं डेसेत्सुसान जानुहुन्छ, तपाईं यी रिसोर्टहरूमा रहन सक्नुहुन्छ। सब भन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट "Sounkyo" हो। सौक्यो असाहिकावाको 65 30 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यो लगभग minutes० मिनेट जति बसबाट जेआर कामिकावा स्टेशनबाट बाटैमा छ। Sounkyo को विवरणको लागि, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> Sounkyo को आधिकारिक साइट यहाँ छ
Panoramic फूल उद्यान Shikisai पहाडी Biei, होक्काइडो, जापान मा
Biei एक धेरै लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र हो Asahikawa को २ 25 किलोमिटर दक्षिण मा अवस्थित। यो JR Asahikawa स्टेशन बाट Biei स्टेशन को लागी ट्रेन बाट करीव minutes 35 मिनेट छ। यो Asahikawa एयरपोर्ट बाट Biei स्टेशन को लागी बस बाट लगभग १ minutes मिनेट छ।
Biei मा एक हल्का रोलिंग मैदान छ। गर्मी मा, यहाँ सुन्दर फूल खिल। र जाडोमा शुद्ध सेतो हिउँको संसार देखा पर्दछ।
Biei मा सब भन्दा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल "Shikisai-no-oka" नामको टुरिस्ट फार्म हो जुन माथिको फोटो र भिडियोमा देखीन्छ। यहाँ ल्याभेन्डर क्षेत्रहरू अचम्मका छन्। Shikisai-no-oka को लागी, कृपया तल मेरो लेख हेर्नुहोस्।
＞＞ फोटोहरू: Biei र Furano मा गर्मी
>> "Shikisai-no-oka" को बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Biei मा "ब्लू पोण्ड" भनिने एक रहस्यमय स्थान छ माथिको तस्वीर र फिल्ममा देखिए अनुसार। यो पोखरी Asahikawa एयरपोर्टबाट लगभग about० मिनेटमा र JR Biei स्टेशनबाट २ 40 मिनेटको दूरीमा छ। बसहरु पनि Biei स्टेशन बाट संचालित भइरहेको छ।
मौसम र समय क्षेत्रको आधारमा निलो पोन्डको रंग परिवर्तन हुनेछ। यो एप्पलको पीसी वालपेपरको रूपमा अपनाइएको थियो र विस्फोटक रूपमा प्रसिद्ध भयो। यो सँधै पर्यटकहरूको भीडले भरिन्छ, तर यदि तपाईं बिहान सबेरै जानु भयो भने, तपाईं साँच्चिकै सुन्दर र शान्त संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यो नजिकैको ज्वालामुखीको विस्फोटले गर्दा हुने क्षति रोक्नको लागि निर्माण गरिएको पोखरी हो। सल्फर र चूना यस पोखरीमा बग्यो, र एक रहस्यमय र world्ग संसारको जन्म भयो।
नोभेम्बर देखि जाडो मौसम मा २१ बजे सम्म प्रकाश गरिनेछ। यद्यपि यो बन्द हुन सक्दछ, कृपया जानकारी स्थानीय रूपमा जम्मा गर्नुहोस्।
Biei, Hokkaido मा, एक धेरै सुन्दर पर्यटन स्थल "ब्लू पोन्ड" भनिन्छ। यो पोखरी एप्पल पीसी वालपेपरको रूपमा अपनाएर प्रसिद्ध भयो। यस पोखरीको परिदृश्य asonsतु र मौसम परिवर्तनसँग परिवर्तन हुन्छ। यदि तपाईं Biei वा Furano जानुहुन्छ, रहस्यमय अनुभव गर्न निश्चित हुनुहोस् ...
Biei को विवरणको लागि कृपया निम्न आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> Biei को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टोमिटा फार्म, फुरानो, होक्काइडो, जापानमा शाउटर्स्टकमा लैभेंडर मैदानमा उभिएकी महिला
Furano दर्शनीय क्षेत्र को रूप मा धेरै प्रसिद्ध छ जहाँ सुन्दर फूल बगैचा Biei साथ फैलियो। यो होइकाइडोको बिचमा ie० किलोमिटर दक्षिणमा फुरानो बेसिनको केन्द्रीय शहर हो। Furano गर्न, १ घण्टा minutes० मिनेट बस द्वारा Asahikawa बाट, १ घण्टा १० मिनेट Asahikawa एयरपोर्टबाट, hours घण्टा सापोरोबाट।
Furano मा सबै भन्दा लोकप्रिय स्थान माथिको फोटोमा देखिएको ठूलो-फार्म फार्म "फार्म टोमिटा" हो। फुरानो स्टेशनबाट कारमा करिब १ 15 मिनेटमा अवस्थित यस फार्ममा बैजनी लैभेंडर जूनको अन्तिम देखि प्रत्येक वर्ष अगस्टको शुरुमा खिलिन्छ। फार्म तोमिताका लागि, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया तल मेरो लेख हेर्नुहोस्।
>> "फार्म टोमिटा" को बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
किनकि फुरानो बेसिनमा छ, तापक्रम भिन्नता प्रगाढ छ र हिउँदमा सबैभन्दा कम तापक्रम माइनस २० डिग्री सेल्सियस हुन सक्छ। जाडोमा धेरै हिउँ पर्छ। गम्भीर चिसो दिनमा, तपाईं आइस वर्ल्डलाई "हीरा धूल" भनिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ जुन तल फिल्ममा देखिएको छ।
गम्भिर चिसो दिन, तपाईं आइस वर्ल्ड "हीरा धूलो" भनिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ।
>> फोटो सुविधा: Biei र Furano मा गर्मी
>> फोटोहरू: फुरानोमा चार .तुहरू
केप सोया होक्किडो द्वीपको उत्तरी पोइन्ट हो, जापान = शटरस्टक
जापानको समुद्री किनारमा ओरोनन लाइन रोड, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा
Wakkanai जापानको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। यदि तपाईं माथिको फोटोमा देखिएको वाकनाईको सोया केपमा जानुभयो भने, तपाईंले उपलब्धिको निश्चित अनुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं उत्तरी छेउको छेउमा हुनुहुन्छ।
Wakkanai को जनसंख्या लगभग 34,000 छ। समुद्रको प्रवाहको प्रभाव त्यहाँ भएकोले तापक्रम भित्रपट्टि जति कम हुँदैन। तर हावा धेरै कडा छ। हिउँ पनि खस्छ।
यदि तपाईं Asahikawa शहर बाट Wakkanai गर्न को लागी, JR Wakkanai स्टेशन जेआर Asahikawa स्टेशन बाट एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लगभग3घण्टा 40 मिनेट छ। यदि तपाईं भाँडाइ ​​कारको साथ वाककनै जानुहुन्छ भने, यो असहिकावा एयरपोर्टबाट २ 260० किलोमिटर टाढा छ। यात्रा समय करीव hours घण्टा हुनेछ। त्यो अवस्थामा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु माथिको दोस्रो फोटोमा देखीएको ओरियोन लाइनबाट। Ororon रेखा होक्काइडो मा जापान को समुद्री किनारमा एक सडक हो। यदि तपाईं यो सडक बाट वाककनै शहर जानुहुन्छ भने, तपाईंको उपलब्धिको भावना धेरै ठूलो हुनेछ। यो वाक्नै केन्द्रबाट सोया केपको लागि कारबाट लगभग एक घण्टाको दूरीमा छ।
>> फोटोहरू: Wakkanai - होक्काइडो को उत्तरी भाग को शहर
दक्षिणी होक्काइडो (जापानी भाषामा "Dounan") सेन्ट्रल होक्काइडोको साथ लोकप्रिय क्षेत्र हो। दक्षिणी होक्काइडो शाब्दिक रूपमा दक्षिणमा अवस्थित छ, तर किनभने यो पर्याप्त चिसो छ, तपाईं "होक्काइडो" को आनन्द लिन सक्षम हुनुपर्छ। हाकोडाटे, केन्द्रीय शहर, मा धेरै अद्भुत दर्शनीय स्थलहरु छन्।
यदि तपाईं दक्षिणी होक्काइडो जानुहुन्छ भने, तपाईं लगभग दुई योजनाहरूको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। पहिले, मात्र Hakodate मा रहनुहोस्। यदि तपाईं सकेसम्म धेरै पर्यटन गन्तव्यहरूमा जान चाहानुहुन्छ भने दक्षिणी होक्काइडोमा हाकोडाटेमा रहनु, सप्पोरोमा जानु खराब छैन। यदि तपाईं हवाइजहाज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं वरिपरि जानको लागि खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो, तपाईं हाकोडाटे र ओनुमा पार्कमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईं ओनुमा पार्कमा समृद्ध प्रकृतिको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तपाईं हाकोडाटेबाट दिन यात्रा द्वारा ओनुमा पार्क जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं लामो समय सम्म रहन सक्नुहुन्छ, तपाईं जापानी मा उत्तरी भागको महल छ जहाँ मत्सुमा द्वारा रोक्न सक्नुहुन्छ।
हाकोडाटे एयरपोर्ट हकोडाट केन्द्रको लगभग kilometers किलोमिटर पूर्वमा छ। त्यहाँ युनोकावा ओन्सेन छ जो यस प्रख्यात तातो वसन्त रिसोर्ट क्षेत्र हो जुन यस बीचको बिन्दुमा एयरपोर्ट र हाकोडेट बीचमा छ। होक्काइडो शिन्कन्सेनको शिन-हाकोडाटे-होकोटो स्टेशन935 किलोमिटर टाढा छ।
>> हाकोडाटे एयरपोर्टको आधिकारिक साइट (केवल जापानी)
JR Hakodate स्टेशन: बस बाट २० मिनेट
JR शिन-हाकोडाटे-Hokuto स्टेशन: बस बाट minutes० मिनेट
हाकोडाटे ओनुमा प्रिन्स होटल: बसबाट by० मिनेट
न्यू चीटोज (सप्पोरो), ओकाडामा (सप्पोरो), ओकुशिरी,
हनेडा (टोक्यो), नरिता (टोक्यो), Chuu अन्तर्राष्ट्रिय (नागोया), Itami (ओसाका)
हकोडाट एउटा सहर हो जुन होक्काइडोमा सप्पोरोको साथ पर्यटकहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ। यस शहर मा एक राम्रो बन्दरगाह भएकोले, यो २० औं शताब्दी को पहिलो आधा देखि व्यापार र माछा पालन मा विकसित भएको छ।
यस शहरको सब भन्दा राम्रो पर्यटन आकर्षण माउंट हो। हाकोडाटे (उचाई 334 XNUMX मीटर) यदि तपाईं यस पहाडको शीर्षमा रोपवेमा चढ्नुभयो भने, तपाईं अचम्मको रात दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं माथिको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ अर्को पर्यटक आकर्षण छ जुन म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु। यो हाकोडाटे बिहानको बजार (हकोडाट असैची) जेआर हाकोडेट स्टेशनको नजिक छ। तपाईले यहाँ धेरै सस्तो स्वादिष्ट माछा र खानाहरू सस्तोमा खान सक्नुहुन्छ।
किनभने हाकोडाटे पश्चिमी देशहरूसँगको व्यापारको माध्यमबाट विकसित भएको छ, त्यहाँ धेरै पश्चिमी शैलीका रेट्रो भवनहरू पनि छन्। विशेष गरी सुन्दर रेट्रो भवनहरू मोटोमाची भनिने क्षेत्रमा लाइन लगाइएको छ, त्यसैले कृपया एक टहल लिनुहोस्। मोटोमाचीको ढाँचाबाट देखिएको बन्दरगाहको दृश्य पनि अचम्मको छ।
मैले अर्को लेखमा हाकोडाटेको बारेमा विस्तृत रूपमा लेखें। कृपया यस लेखमा हाकोडाटेका राम्रा चित्रहरूको आनन्द लिनुहोस्!
>> Hakodate को बारे मा विवरणको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ओनुमा पार्क दक्षिण पश्चिम होक्काइडो, जापान मा ओशिमा प्रायद्वीप मा राष्ट्रीय पार्क हो। पार्कमा ज्वालामुखी होक्काइडो कोमागाटाके साथै ओनुमा र कोनुमा पोखरीहरू = शटरस्टक
हाकोडाटे जापानको सब भन्दा अचम्मको पर्यटन शहर हो, तर यदि तपाईं नेत्रहीन दृश्यहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं हकोडाटेको अतिरिक्त ओनुमा पार्क जानुहोस्। ओनुमा पार्क गर्न, यो लगभग २० मिनेट जति हाकोडाटेबाट JR एक्सप्रेस द्वारा छ। तपाईं यस पार्कमा एक दिन यात्रामा जान सक्नुहुन्छ।
ओनुमा पार्क माउन्टमा केन्द्रित एक विशाल पार्क हो। कोमागाटाके यस पहाड वरपर धेरै सुन्दर तालहरू छन्। तपाईं यस पार्कमा डुating्गा, साइकल, घोडा सवारी जस्ता गतिविधिहरूको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। ओनुमा पार्कमा एक ठूलो स्की रिसोर्ट पनि छ।
मैले निम्न लेखमा ओनुमा पार्कको बारेमा विस्तृत रूपमा लेखें। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> ओनुमा पार्कको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यदि तपाईं दक्षिणी होक्काइडोमा अप्रिलको लेटदेखि मेको प्रारम्भसम्म यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं मात्सुमाद्वारा पनि रोकिनुहुनेछ। मत्सुमा हक्काइडोको दक्षिणी भागको शहर हो, हकोडाटको w kilometers किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा। यो शहरमा केवल जापानी शैलीको महल होक्काइडोमा छ। यस महलमा अप्रिलको अन्त्यमा धेरै चेरी फूलहरू फूल्छन्।
हाकोडाटेमा पश्चिमी शैलीको महल रहेको छ जसको नाम "गोरियोकाकू" छ। उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, टोकुगावा शोगुनेट सेना र नयाँ सरकारी सेनाले मात्सुमा कैसल र गोरियोकाकूमा हिंस्रक लडाई लडे। किन तपाईं मत्सुमा त्यस्तो ईतिहास सहित आनन्द लिनुहुन्न?
मत्सुमाको बारेमा मैले निम्न लेखमा विस्तृत रूपमा लेखें।
>> मात्सुमाको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यदि तपाईं वन्य प्रकृति दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ जुन विकास गरिएको छैन भने पूर्वी पूर्वी होक्काइडो जस्तो उत्तम कुनै ठाउँ छैन। किनकि पूर्वी होक्काइडो एकदम विशाल छ, यस पृष्ठमा म यसलाई तीन श्रेणिहरूमा परिचय दिनेछु।
पूर्वी होक्काइडोको केही उडानहरू छन्, र रेलवे नेटवर्क अत्यन्त नराम्रो छ, तर यो जानको लागि तुलनात्मक रूपमा सजिलो भएको ठाँउ तोक्ची जिल्ला दक्षिण तर्फ हो। यदि तपाईं वास्तवमा अविकसित क्षेत्रमा जान चाहानुहुन्छ भने यो जिल्ला अपर्याप्त हुन सक्छ तर यस जिल्लाको लागि तपाईं जेआर लिमिटेड एक्सप्रेस प्रयोग गरेर सजिलै साप्पोरोबाट जान सक्नुहुनेछ। टोकाची जिल्लाको विशेषता यसको भव्य मैदान हो। टोकाची मैदानमा विशाल चराहरू र सुन्दर जंगलहरू जारी छन्। कृपया सबै प्रकारले यस्तो दृश्यको आनन्द लिनुहोस्।
>> फोटोहरू: तशुबेट्सु पुल
ओबिहिरो एयरपोर्ट (टोकाची ओबिहिरो एयरपोर्ट)
ओबिहिरो एयरपोर्ट ओबाइहिरोको केन्द्रदेखि तोकाची मैदानको मध्य शहरको करीव २ km किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ। आधिकारिक नाम ओबिहिरो एयरपोर्ट हो, तर हालसालै यसलाई टोकाची ओबिहिरो एयरपोर्ट पनि भनिन्छ। यस एयरपोर्टमा धेरै टोकियो उडानहरू छन्। यद्यपि त्यहाँ सप्पोरो उडान छैन। यो किनभने यात्रीहरू २ घण्टा minutes० मिनेटले JR एक्सप्रेस प्रयोग गरेर साप्पोरो जान सक्छन्।
>> ओबिहिरो एयरपोर्टको आधिकारिक साइट
ओबिहिरोको केन्द्र: बस - --० - minutes० मिनेट
सूर्यास्त हिउँ क्षेत्र, ओबिहिरो, जापान = शटरस्टक
ओबिहिरोमा कोफुकु स्टेशन, होक्काइडो = एडोब स्टक
होक्काइडोमा यात्रा गर्दा तपाईंले कहिलेकाँही सुन्दर जंगलहरू भेट्नुहुनेछ। विशेष गरी टोकाची मैदान, होक्काइडोको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित, त्यहाँ धेरै राम्रा जsts्गलहरू छन्। यदि तपाईं बिहान सबेरै हिंड्नु भयो भने, तपाईंले शान्त वनलाई भेट्न सक्नुहुन्छ जुन चारैतिर कुहिरोले घेरिएको छ! वें सुन्दर वनको फोटो र ...
ओबिहिरो तोकाची जिल्लाको मध्य शहर हो। जनसंख्या करीव १ 160,000०,००० मानिस छन्। टोकाची मैदानी क्षेत्रहरूमा जहाँ यो शहर अवस्थित छ, ठूलो मात्रामा field बाली र दुग्ध खेती फस्टाउँदैछ। यदि तपाईं ओबिहिरोको उपनगरहरूमा जानुहुन्छ भने, तपाईं विशाल फार्म र चराउने दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यो विशाल मैदानमा, वायुब्रेक जंगलहरू छरिएका छन्। यी सुन्दर वनहरूको उच्चारणको रूपमा, तपाईं सुन्दर फोटोहरू लिन सक्नुहुनेछ। आश्चर्यजनक हिउँ परेको दृश्यहरू यहाँ र त्यहाँ देख्न सकिन्छ, विशेष गरी जाडोमा माथिको फोटो जस्तै।
ओबिहिरोमा पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय ठाउँ कोफुकु स्टेशनको पुरानो स्टेशन भवन हो। कोफुकुको अर्थ जापानीमा "खुशी" हो। यस स्टेशनको साथ मार्ग पहिले नै समाप्त गरिसकिएको छ, तर अहिले पनि युवा जोडीहरू यस स्टेशन भवनमा एक स्मारक फोटो लिन घरेलू र विदेशबाट आएका छन्। त्यहाँ एउटा वेडिंग ड्रेस वा टक्सिडोमा कपडा बदल्नको लागि एक कार्यक्रम पनि छ।
स्टेशन भवनमा तपाईं सानो घण्टी बज्न सक्नुहुन्छ। स्मरणार्थमा तपाईं स्टेसन भवनमा तपाईंको व्यवसाय कार्ड टाँस्न सक्नुहुनेछ। पुराना ट्रेनहरू पनि बाँकी छन्, त्यसैले कृपया भ्रमण गर्नुहोस्।
कुशीरो जिल्ला तोकाची मैदानको पूर्वमा अवस्थित छ। मध्य शहर, कुशिरो प्रशान्त महासागरको अनुहारको पोर्ट शहर हो र माछा स्वादिष्ट हुन्छ। यस जिल्लामा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यहरु कुशिरो शहर नजिकको कुशिरो मार्श र हिमाली क्षेत्रको आकान ताल हो। यी दर्शनीय स्थलहरूमा, तपाईं अविकसित समृद्ध प्रकृतिलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। पूर्वी होक्काइडोमा जापानको सागर भन्दा कम हिमपात छ, तर यो शरद fromतुदेखि जाडोसम्म चिसो छ, त्यसैले कृपया कोट जस्ता जाडोका लुगालाई नबिर्सनुहोस्।
कुशिरो एयरपोर्ट (तान्चो कुशिरो एयरपोर्ट)
कुशिरो एयरपोर्टको नक्शा
कुशिरो एयरपोर्ट कुशिरो केन्द्रबाट लगभग २० किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित पूर्वी होक्काइडोको मुख्य एयरपोर्ट हो। हालसालै यसलाई "तान्चो कुशिरो एयरपोर्ट" पनि भनिन्छ। "तान्चो" कुशिरो मार्स बसोबास गर्ने क्रेन हो। यो तुलनात्मक रूपमा कुशिरो-शित्सुगेन नेश्नल पार्क र एकान राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक छ जुन पूर्वी होक्काइडोको लोकप्रिय ठाउँ हो।
>> कुशिरो एयरपोर्टको आधिकारिक साइट
कुशिरो स्टेशन = बस द्वारा minutes 45 मिनेट,
ताल अकान = बस द्वारा 70० मिनेट
घरेलु उडान (होक्काइडो)
नयाँ Chitose (सप्पोरो)
हनेडा (टोकियो), नयाँ Chitose, Okadama,
∗ इटामी (ओसाका), नागोया = केवल गर्मीमा
नाकाशिबेत्सु एयरपोर्ट (नेमुरो नकशिबेत्सु एयरपोर्ट)
नाकाशिबेत्सु एयरपोर्ट जापानको पूर्वी एयरपोर्ट हो। आधिकारिक नाम नाकाशिबेत्सु एयरपोर्ट हो, तर हालसालै यसलाई नेमुरो-नकशिबेत्सु एयरपोर्ट पनि भनिन्छ। यो नकाशिबेत्सुको केन्द्रबाट लगभग km किलोमिटर उत्तर पश्चिममा छ। नाकाशिबेत्सु एयरपोर्ट सानो छ, तर एयरपोर्टको १०० किलोमिटर भित्र, त्यहाँ नेमुरो छ जुन यस क्षेत्रको मुख्य शहर हो र शिरेटोको जुन लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणहरू हुन्। त्यसैले यो एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हो। यो लगभग minutes ० मिनेटको बसबाट एयरपोर्टको नकशिबेत्सु बस टर्मिनलबाट शिरेटोको प्रायद्वीपको राउसु हुँदै जान्छ।
>> नकाशिबेत्सु एयरपोर्टको आधिकारिक साइट (केवल जापानी)
नाकाशिबेत्सु बस टर्मिनल = १० मिनेट बस द्वारा,
नेमुरो स्टेशन बस टर्मिनल = १ घण्टा १ 1 मिनेट बस द्वारा
कुशिरो मार्श क्षेत्र, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
कुशिरो पूर्वी होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो शहर हो। जनसंख्या करीव १ 170,000०,००० छ। यो शहर धेरै विशाल छ र कुल क्षेत्रफल १ 1360 वर्ग किलोमीटर छ।
कुशिरो शहरमा दुईवटा राष्ट्रिय पार्कहरू छन्। एउटा कुशीरोशिट्सुगेन नेश्नल पार्क हो। अर्को उत्तरमा अकान-माशु राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। पछिल्लोको बारेमा, म यसलाई पछि परिचय दिनेछु।
पूर्व कुशीरोशिट्सुगेन नेश्नल पार्क तुलनात्मक रूपमा कुशिरो र कुशीरो एयरपोर्टको शहर क्षेत्रको नजिक छ। यहाँ जापानको सब भन्दा ठूलो मार्श कुशीरोशिट्सुगेन (कुशिरो मार्श, वा कुशिरो वेटलैंड) फैलदैछ। यो टोकियोको २ w वार्ड जत्तिकै ठूलो छ।
यस मार्समा "कुशिरो मार्श वेधशाला", "कोट्टारो मार्श वेधशाला", "होसुका वेधशाला" जस्ता अवलोकन स्टेशनहरू छन्, र तपाईं विशाल ओटा मैदानहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यी मध्ये सब भन्दा ठूलो अवलोकन प्लेटफर्म "कुशिरो मार्श वेधशाला" हो। यो कार द्वारा JR Kushiro स्टेशन बाट करीव minutes० मिनेटको दूरीमा छ (Akan बस: Tsurui Line), र कारबाट Kushiro एयरपोर्टबाट १ minutes मिनेट। त्यहाँ यस वेधशालाको नजिक रूख मार्ग छ, र तपाईं भ्याटल्यान्डमा हिंड्न सक्नुहुन्छ।
कुशिरो मार्समा, तपाईं पर्यटक ट्रेन "कुशिरो-शित्सुगेन-नोरोकको-गो" लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं एउटा डुoe्गाको साथ यो भ्याटल्याण्डको माध्यमबाट पनि जान सक्नुहुन्छ।
कुशिरो मार्सका विवरणहरूको लागि, कृपया सन्दर्भित गर्नुहोस् वातावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट.
जापानी रातो मुकुट क्रेन (तान्चो) जाडो मा कtingचिंग, कुशिरो, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
कुशिरोमा, तपाईंले माथिको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै जापानी क्रेनहरू (रातो मुकुटको क्रेनहरू) जीवित छन्। जापानी क्रेन जापानको सबैभन्दा ठूलो चरा हो जुन लम्बाई १ 140० सेन्टीमिटर हुन्छ। जब यो क्रेनले पखेटा फैलाउँछ, यसको चौडाई २ मिटर भन्दा बढी छ।
एक पटक तिनीहरू जोडी बन्छन्, तिनीहरू सँगै बाँच्दछन् बाँकी जीवनका लागि। जाडोमा, तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने युवा क्रेनहरूको विवाह प्रसंग नृत्य हेर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
२० औं शताब्दीको पहिलो आधामा जापानी क्रेन विलुप्त हुने खतरामा थिए। यद्यपि त्यस पछि क्रेनलाई बचाउन गतिविधिहरू शुरू भए। जाडोको समयमा (नोभेम्बर - मार्च) जब खाना कम हुन्छ, खुवाउन गतिविधिहरू पनि जारी रहन्छ। नतिजाको रूपमा, क्रेनहरूको संख्या अब १००० चराहरूलाई पार गर्दैछ।
तपाईं कुशिरो वेटलैंड र उत्तरमा आकान क्षेत्रमा क्रेनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले क्रेनहरू देख्न सक्नुहुने ठाउँ कुशिरो एयरपोर्टबाट १० मिनेटमा अवस्थित "कुशिरो जापानी क्रेन रिजर्व" हो। विवरणको लागि, कृपया निम्न साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> कुशिरो - ताल अकानको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
ताल अकान, ताल माशु, ताल कुशरियो
फ्रोजन लेक अकान, होक्काइडो। अकान लेक ज्वालामुखीको विस्फोटबाट जन्म भएको थियो। यो माउंट माकान र माउंट ओकान = शटरस्टकद्वारा घेरिएको छ
कुशिरो क्षेत्रको उत्तरी भागमा त्यहाँ एक विशाल आकान माशु राष्ट्रिय निकुञ्ज छ जसको कुल क्षेत्रफल 91,000 १,००० हेक्टर छ। यस राष्ट्रिय पार्कको of ०% भन्दा बढी अविकसित छ। ती मध्ये धेरै शंकुधारी ज are्गल हो। यस राष्ट्रिय पार्कको दक्षिणी भागमा अकान ताल हो। र उत्तरमा ताल मुशु र ताल कुशारो छ। यी तालहरू ज्वालामुखी क्रियाकलापबाट जन्मिएको थियो। यहाँ आइनुको बस्ती पनि छ, आदिवासीहरू जो यस क्षेत्रमा उजाडस्थानको सम्मानका साथ बस्दछन्। तपाईं यहाँ जंगली पहाडहरूले घेरिएका रहस्यमय तालहरू द्वारा प्रभावित हुनुहुनेछ।
यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा, तपाईं उत्तर तिर अवस्थित मेमेन्बेत्सु एयरपोर्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईं यो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मेमानबेत्सु एयरपोर्ट र अगाशिरी अगाडि जान सक्नुहुन्छ।
यस क्षेत्रमा विस्तृत टुरिष्ट जानकारीका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
लेक काई बल (Aegagropila linnaei) कि जापानी मा मारिमो को रूप मा चिनी को लागी हरियो शैवाल होक्काइडो, जापान मा अकान लेक अवस्थित छ
अकान ताल 30० किलोमिटरको क्रेटर ताल हो। त्यहाँ माउन्ट छन्। ओकान (पुरुष माउन्टेन) र माउन्ट। Meakan (महिला पर्वत) यस सुन्दर ताल वरिपरि। ज्वालामुखी गतिविधि अझै माउन्टमा जारी छ। मीकान।
अकान तालको वरिपरि त्यहाँ एक तातो वसन्त रिसोर्ट छ "आकानको ओन्सेन (लेक अकन ओन्सेन)" करिब २० होटल सम्मिलित छ। केवल यस स्पा रिसोर्टको वरपरको वातावरण विकसित हुन्छन्, र खुशी डु boats्गा, मोटर डु boats्गा, आदि संचालित हुन्छन्। तपाईं माछा पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छिमेकमा पैदल मार्ग छ।
तातो वसन्त शहरको पश्चिमी अन्तमा, त्यहाँ होक्काइडोमा सबैभन्दा ठूलो ऐनु बस्ती छ। त्यहाँ स्मारिका पसलहरू जस्तै आइनुको हस्तकलाहरू त्यहाँ छन्। त्यहाँ ऐन सम्बन्धित संग्रहालय र थिएटरहरू छन्। त्यहाँ, ऐनुको पुरानो नृत्य र संगीत कार्यक्रमहरू आयोजित छन्।
यो ताल हिउँदमा स्थिर हुन्छ। तपाईं स्नोमोबाईलमा सवारी गर्न वा बरफमा माछा समात्न सक्नुहुन्छ। यो ताल गर्मी भन्दा जाडोमा बढी रहस्यमय हुन्छ। जे होस्, यो आश्चर्यजनक चिसो छ।
अकान तालमा, "मारिमो" भनिने दुर्लभ शैवाल प्रजातिहरू जीवित छन्, जसरी माथिको चित्रमा देखाइएको छ। मारिमो एक रहस्यमय जीव हो जुन पानीमा चारैतिर घुमाउँछ। यो टेबल टेनिसको बल भन्दा सानो हुन्छ, तर यो अझ ठूलो हुन सक्दछ। तपाईं एक स्मारिका पसलमा एक Marimo खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
यो करीव १ घण्टा १० मिनेट कुशिरो एयरपोर्टबाट अकान ताल तालमा हुन्छ। यो एक घण्टा 1० मिनेट JR कुशिरो स्टेशन बाट छ। यसबाहेक यो १ घण्टा १० मिनेट नकशिबेत्सु एयरपोर्टबाट छ।
ताल माशु, ताल Kusshario
माशु ताल प्रायः रहस्यमय कुहिर = शटरस्टकमा समाहितको लागि प्रख्यात छ
ग्रीष्म Lakeतु माशु ताल माशु तालको तेस्रो अवलोकन डेक = शटरस्टकको दृश्य
यदि तपाईं अकान ताल भन्दा बढी रहस्यमय ताल हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु माशु तालमा, जुन अकान तालको उत्तरमा २० मिनेट टाढा छ।
माशु ताल २० किलोमिटरको वरिपरि छाउनी झील हो जुन ज्वालामुखी गतिविधिबाट born००० वर्ष अगाडि जन्मेको थियो। यस ताल संसारको सबैभन्दा पारदर्शी ताल हो किनकि बाहिरबाट कुनै नदी बग्दैन। यसैले यो ताल धेरै नै सुन्दर छ र यसको निलो रंगलाई "माशु निलो" भनिन्छ।
यो ताल धेरै असुविधाजनक ठाउँमा छ। बसहरू ग्रीष्म duringतुमा सञ्चालन हुन सक्छ तर मूलतः यो कार भाडामा लिनु राम्रो हुन्छ। वा तपाईं कुशिरो शहरको केन्द्रबाट हेर्नको लागि बस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
माशु ताल धेरै नै गहिरो ताल हो जुन २११..211.5 मिटर अधिकतम गहिराईको साथ छ। यस तालको वरिपरि पहाडहरू छन् जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ। यसबाहेक, यस तालमा प्रवेश गर्न गम्भीर प्रतिबन्धित छ। त्यसोभए, तपाईंले यस ताललाई पहाडमा देख्न सक्ने थुप्रै निरीक्षण डेकबाट हेर्नु पर्छ।
माशु तालको पानी सतहको र that्ग त्यस समयमा मौसम अनुसार परिवर्तन हुन्छ। यस झीलमा प्रायः धुइहरु आउँछन्। कुहिरोमा बेह्रेको ताल धेरै रहस्यमय छ।
माशु तालको उत्तरपूर्वी भागमा कामी-नो-को आइके भनिने एक स्पष्ट पोखरी हो, २ 220० मिटर वरपर। यो पोखरी, meters मिटर गहिरो, तपाईं तल चित्रमा देखिएझै पन्ना निलो रंगले रूखहरू पानीमा डुबाइएको देख्न सक्नुहुन्छ। यस पोखरीले यी दिनहरू द्रुत रूपमा ध्यान खिचेको छ। जे होस्, जाडोमा हिउँ यस पोखरीमा जाने बाटोमा जम्मा हुनेछ। जब सडक बन्द हुन्छ, तपाईले अगाडि5किलोमिटर हिड्नुपर्नेछ। विशेष गरी हिउँ पर्ने दिनमा यो खतरनाक भएकोले कृपया आफैंलाई नहाल्नुहोस्।
यो कुशिरो एयरपोर्टबाट माशु तालुरोसम्म २ घण्टा २० मिनेट र जेआर कुशिरो स्टेशनबाट २ घण्टा १० मिनेट जति लाग्छ। यसले मेमानबेत्सु एयरपोर्टबाट २ घण्टा लिन्छ।
कामिनोको- ike, भगवान को पोखरी बच्चा, रहस्यमय पोखरी कि भूमिगत पानी प्रवाह बाहिर, कियोसोटो टाउन, पूर्वी होक्काइडो = शटरस्टक
ताल Kussharo जाडो परिदृश्य = शटरस्टक
ताल कुशारो 57 30 किलोमिटर वरपरको ठूलो ताल हो। यो माशु तालबाट कारबाट करिब XNUMX० मिनेट जति छ।
यो ताल जापानको सबैभन्दा ठूलो क्रेटर ताल हो। यो ज्वालामुखी विस्फोटबाट जन्मेको थियो जुन प्राचीन कालदेखि धेरै चोटि भएको थियो।
ताल कुशारोलाई हेर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेको तालको पश्चिम तर्फ रहेको बिहरो दर्रे हो। यदि त्यहाँ अवलोकन डेकबाट तपाईंले यस ताललाई हेर्नुभयो भने, तपाईं भव्य दृश्यहरू देखेर छक्क पर्नुहुनेछ।
धेरै पर्यटक आधारहरू जस्तै आनन्द क्रूज अवतरण तालको पूर्व पक्षमा छन्। यस तालको उत्तर तिर कुनै सडक छैन, त्यसैले तपाईं ताल वरिपरि जान सक्नुहुन्न। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो एक खुशी विचार क्रूज लिनु राम्रो विचार हो। यो खुशी क्रूज यस तालको वरिपरि एक घण्टामा यात्रा गर्दछ।
ताल वरिपरि, तातो स्प्रि .्गहरू यहाँ र त्यहाँबाट आउँछन्। तालको किनारमा तातो वसन्तको साथ शिविर स्थल पनि छ। यदि तपाईं वास्तवमै तातो स्प्रि enjoyको मजा लिन चाहानुहुन्छ, त्यहाँ ठूला रिसोर्ट होटेलहरू पनि छन् त्यसैले तिनीहरूमा नै बस्नुहोस्। यद्यपि केही होटलहरू जाडोमा खुला हुँदैनन्, त्यसैले कृपया पहिले नै जाँच गर्नुहोस्।
ताल Kussharo कार बाट Memanbetsu एयरपोर्ट बाट एक घण्टा को दूरी को दूरी मा छ। यो लगभग एक घण्टा र १० मिनेटको दूरीमा नकाशिबेत्सु एयरपोर्टबाट कारमा छ।
पूर्वी होक्काइडोमा, सबैभन्दा लोकप्रिय जिल्ला यहाँ छ। यो क्षेत्र शायद २० औं शताब्दी पछि पनि विकसित भएको थियो। त्यसो भए तपाई आश्चर्यजनक प्रचुर प्रकृतिलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु विशेष गरी शिरेटोको प्रायद्वीपमा। यस प्रायद्वीपमा, तपाईं जंगली भालु र हिरणहरू देख्नुहुनेछ।
यो क्षेत्र हिउँदमा ओखोटस्कको सागरबाट बग्ने बहाव बरफको लागि पनि प्रख्यात छ। यदि तपाईं चिसो संसारको अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई यहाँ जाडोमा जानुहुन्छ!
ओखोट्स्क जिल्ला धेरै विस्तारित छ, कम सार्वजनिक यातायातको साथ। अवश्य पनि तपाई सप्पोरो आदिको साथमा यात्रा मार्ग बनाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, म सिफारिश गर्दछु कि तपाई धेरै समयको साथ सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नुहोस्।
Memanbetsu एयरपोर्ट को नक्शा, होक्काइडो, जापान
पूर्वी होक्काइडोको ओखोटस्क क्षेत्रमा मेमानबेत्सु एयरपोर्ट मुख्य एयरपोर्ट हो। यो अबाशिरीको २२ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ जुन यस क्षेत्रको केन्द्र शहर हो। मेमानबेत्सु एयरपोर्ट एक मूल्यवान एयरपोर्ट हो जुन पूर्वी होक्काइडोको प्रमुख पर्यटक गन्तव्यहरू जस्तै आबाशिरी, शिरेटोको, आकानमा पहुँच गर्न सक्दछ।
>> Memanbetsu एयरपोर्ट को आधिकारिक साइट
अबाशिरी बस टर्मिनल = बस द्वारा 35 minutes मिनेट
Kitami बस टर्मिनल = बस बाट minutes० मिनेट
Utoro Onsen बस टर्मिनल = २ घण्टा १० मिनेट बस द्वारा
मिहोरो दर्रा (आकान) = २ घण्टा minutes मिनेट बस द्वारा
हनेडा (टोकियो), Chuu अन्तर्राष्ट्रिय (नागोया)
मोन्बेत्सु एयरपोर्ट (ओहोट्सु मोन्बेत्सु एयरपोर्ट)
ओखोटस्क मोन्बेत्सु एयरपोर्टको नक्शा
मोन्बेत्सु एयरपोर्ट एक सानो एयरपोर्ट हो जुन मोन्बेत्सुको केन्द्रबाट kilometers किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा ओखोटस्कको सागर सामना गर्दछ। यस क्षेत्रमा रेलवे खारेज छ र एयरपोर्टको महत्त्व बढ्दैछ। यद्यपि वास्तवमा एयरपोर्टमा त्यहाँ थोरै प्रयोगकर्ताहरू थिए, त्यसैले सप्पोरो उडानहरू आदि यस कारणले रद्द गरियो। हाल केवल टोकियो उडान मात्र सञ्चालनमा छ।
>> मोन्बेत्सु एयरपोर्टको आधिकारिक साइट
Monbetsu बस टर्मिनल = बस द्वारा १ 15 मिनेट
जापानको आबाशिरीमा अबाशिरी जेल संग्रहालयको कोरीडोर = शटरस्टक
अबाशिरी कारागार संग्रहालय इतिहासको बाहिरी संग्रहालय हो। Meiji युग पछि अबाशिरी कारागारका लागि भवनहरू संरक्षित छन् र सार्वजनिकको लागि खुला छ = शटरस्टक
अबाशिरी man 35 हजारको जनसंख्या भएको सहर हो र man 35 मिनेट बस मेमेनबेत्सु एयरपोर्टबाट। यो शहर ओखोटस्कको सागरमा पर्छ।
धेरै जापानीसँग अबाशिरीको लागि "सब भन्दा टाढा शहर" को एक छवि छ। यस शहरको सब भन्दा प्रसिद्ध पर्यटकीय आकर्षण बाहिरी संग्रहालय "द आबाशिरी कारागार संग्रहालय" हो जुन पुरानो आबाशिरी जेल प्रयोग गर्दैछ।
२० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा धेरै कैदीहरूलाई यस शहरमा पठाइयो। यस संग्रहालयमा, जुन जेआर अबाशिरी ट्रेन स्टेशनबाट १० मिनेटको बस सवारीमा छ, लामो काठको जेल छोडियो। यो काठ निर्माण समूह यति शक्तिशाली छ कि साना केटाकेटीहरू रुन थाल्छन्। जीवन आकारको पुतलीले त्यहाँ बन्दीहरूको जीवन देखाउँदछ। कैदीहरूले अत्यन्त चिसो जेलको जीवन बिताए। किनकि त्यहाँ एक कैदी छ जो यस जेलबाट भाग्यो, यसको उपस्थिति पनि पुतली द्वारा बनाईन्छ।
त्यहाँ अर्को प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, केप नोटोरी, जेआर अबाशिरी स्टेशनबाट २० मिनेट बसमा छ। यो केपबाट जहाँ height०-20० मिटर उचाइको चट्टान निरन्तर चलिरहेको छ, तपाईं ओखोटस्कको सागर बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक जाडो, यस केपमा बग्ने बरफ प्रवाह। म फेब्रुअरीमा यस केपमा छु। अचम्मको कुरा, यस केपबाट ओखोटस्कको समुद्रमा कुनै छाल देखिएन। बरफको असंख्य समुद्रले ढाक्यो। र, शान्त उत्तरी हावा यो शान्त हिउँ संसारबाट उस्को थियो।
तपाईं आबाशीरी पोर्टबाट यो आइस संसारमा समर्पित डु by्गाबाट जान सक्नुहुन्छ। तपाईं बहाव बरफ मा एक छाप पाउन सक्षम हुनेछ। यस भ्रमणको बारेमा मैले अर्को लेखमा प्रस्तुत गरें। कृपया यदि तपाईंलाई आपत्ति पर्दैन भने त्यो पृष्ठमा ड्रप गर्नुहोस्।
>> Abashiri गरेको बर्फ बरफको बारेमा विवरणको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
>> फोटोहरू: अबाशिरी - "सबैभन्दा टाढा" मा बहाव बरफ र जेलहरू हेर्नुहोस्।
मिडविन्टर, अबाशिरी, होक्काइडो, जापानमा नोटोरो केसप र ड्राफ्ट आइस
आइसब्रेकिंग जहाज "अरोरा", अबाशिरी, होक्काइडो
शिरेटोको प्रायद्वीप जहाँ कुनै न कुनै क्लिफ जारी छ। तपाईं समुद्रबाट रमाईलो डु boat्गा, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ
होर्कैडोको उत्तरपूर्वी भागमा पर्ने शिरेटोको प्रायद्वीप त्यो क्षेत्र हो जहाँ जापानमा जंगली प्रकृति रहन्छ। शिरेटोको विश्व सम्पदा साइटको रूपमा दर्ता गरिएको छ।
"शिरेटोको" "सिरी इटोकू" बाट आएको हो जसको अर्थ "पृथ्वीको अन्त" आदिवासी जनजाति ऐनूको शब्दमा छ। टोकियो जस्ता ठूला शहरहरूको विपरित अद्भुत प्रकृतिले तपाईं अभिभूत हुनुहुनेछ।
यस प्रायद्वीपको उत्तरी तर्फ एउटा मध्य शहर रहेको छ जसलाई युटोरो भनिन्छ। यहाँ धेरै होटलहरू छन्। Utoro Memanbetsu एयरपोर्टबाट कार भाडामा करिब २ घण्टा १2मिनेट छ। यदि तपाईं बस प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो २ घण्टा २० मिनेटको सीधा बस "शिरेटोको एयरपोर्ट लाइनर" बाट मेमानबेत्सु एयरपोर्टबाट हुन्छ। दिनमा buses वटा बसहरू छन्।
शिरेटोको प्रायद्वीपको दक्षिण तर्फ, अर्को केन्द्रीय शहर, राउसु छ। यहाँ धेरै होटलहरू छैनन्। राउसु tor० मिनेटको बस सवारी उटोरोबाट छ। एक दिनमा चारवटा बसहरू सञ्चालन हुन्छन्। यो २ घण्टा 50० मिनेटको बसबाट मेमेन्बेत्सु एयरपोर्टबाट छ। यदि तपाईं नकाशिबेत्सु एयरपोर्टबाट कारबाट आउनुभयो भने यात्राको समय १ घण्टा १० मिनेट हो।
उटोरो र राउसु बीचमा, शिरेटोको दर्रा छ, र यो पास पार गर्ने बाटो अद्भुत छ। यद्यपि यो रोड हिउँको कारण नोभेम्बरको सुरूवात देखि अप्रिलको अन्तसम्म बन्द हुनेछ। जाडोमा तपाईले अर्को मार्गबाट ​​जानु पर्ने हुन्छ।
सामान्यतया, त्यहाँ जोखिम छ कि हिउँदको प्रभावका कारण हिउँदमा शिरेटोको सडकहरू बन्द हुन्छन्। त्यसैले कृपया सावधान रहनुहोस्।
स्वर्गको रोड Shari-cho, Hokkaido, जापानमा। रोड टु हेभन नाम छ कि रोड सीधा आकाशमा जान्छ। एक दृश्य दिनको समयमा आरामदायक हुन्छ, र रातो आकाशको साथ दृश्य सूर्यास्त = शटरस्टकमा राम्रो छ
एउटी आमा इजो शिका हिरण (सर्भस निप्पन होयोनेसिस) र उनको बिहान गर्मीको दिन शिरेटोको नेश्नल पार्क र वर्ल्ड हेरिटेज साइट, होक्काइडो, जापानको शूटरस्टकमा कमुईवाक्का फल्स नजिकैको ज forest्गलमा फर्केर हेर्छिन्।
पर्यटन स्थल म सबैभन्दा बढि सिफारिस गर्न चाहान्छु शिरेटोको प्रायद्वीपमा शिरेटोको गोको ताल हो जुन पाँच सुन्दर तालहरू सहित। अप्रिलको मध्य देखि अक्टुबरको मध्यसम्म, तपाईं वन्य प्रकृतिबाट टहल लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले गाइड स्टाफ लेक्चर लिनुभयो भने। तपाईं यहाँ जंगली हिरण र स्क्विटरहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। भालु देखा पर्न सक्ने हुँदा, कृपया स्टाफको सल्लाह अनुसरण गर्नुहोस्।
शिरेटोको गोको तालहरू युटोरोबाट कारमा minutes० मिनेटमा अवस्थित छ। मैले शिरेटोको गोको लेक्सलाई पैदल यात्रा बारे लेखमा प्रस्तुत गर्‍यो। कृपया यदि तपाईंलाई आपत्ति पर्दैन भने त्यो पृष्ठमा ड्रप गर्नुहोस्।
>> "शिरेटोको गोको तालहरू" को बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
समुद्रीबाट शिरेटोको प्रायद्वीपको प्रकृतिको आनन्द लिन क्रूजिंग लोकप्रिय होक्काइडो, जापान हो
अर्को चीज तपाईलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु समुद्री जहाजबाट समुद्री शिरेटोको प्रायद्वीप अवलोकन गर्न। किनभने त्यहाँ Shiretoko प्रायद्वीपमा सडकहरू छन्, कार द्वारा पुग्न सक्ने क्षेत्र सीमित छ। अर्कोतर्फ, सागरबाट तपाईं जंगली क्षेत्रमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
उटोरोसँग पाँच कम्पनीहरू छन् जसले क्रूज जहाजहरू सञ्चालन गर्छन्। लगभग people० व्यक्तिको सानो डु from्गाबाट people०० व्यक्तिको ठूलो डु boat्गामा विविध जहाजहरू छन्। साना जहाजहरू जमिनको नजिक जान सक्दछन्। ठूला जहाजहरू यति टाढा जान सक्दैनन्, तर त्यहाँ केहि हल्लाहरू छन्।
क्रूज जहाजमा जानका लागि दुई तरिकाहरू छन्, पाठ्यक्रम शिरेटोको प्रायद्वीपको टुप्पिमा जान र पाठ्यक्रम बाटोमा फर्किने। टिपमा जानको लागि पाठ्यक्रम धीमा गतिको साथ ठूलो डु boat्गाको मामिलामा3घण्टा 45 XNUMX मिनेट हुन्छ। त्यहाँ धेरै सम्भावना छ कि टिपमा जाने पाठ्यक्रमले भूमिमा भालु र समुद्रमा डल्फिनहरू देख्न सक्दछ।
धेरै दर्शनीय डु boats्गा जाडोमा बन्द हुनेछन्। निम्नलिखित ठूला जहाजहरू सञ्चालन गर्ने कम्पनीको साइट हो।
>> Shiretoko Sightseeing Ship Aurora's आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ